Tag: email suufiyada | Martech Zone
Tag: email munaafiqiinta
Shaki kuma jiro naqshadeynta iyo fulinta waxqabadka wax ku oolka ah dukaamaysiga ka tagista ololaha emaylka. Xaqiiqdii, in ka badan 10% emayllada ka tagista gawaarida ayaa la furay, waa la riixay. Iyo celceliska qiimaha dalabyada ee iibsiyada iimaylka ka tagista gaadhiga ayaa 15% ka sarreeya iibsiyada caadiga ah. Ma qiyaasi kartid ujeeddo ka badan booqdaha bartaada oo shey ku kordhinaya gaadhigaaga wax iibsiga! Suuqgeyaal ahaan, ma jiro wax ka xanuun badan wadnaha marka loo eego aragtida soo galitaan weyn